Mipi Nan Ruahning Bang A Si Lo: Dawtnak Ngeih Ahcun Kan Vanttha Ko Tiah Min Zar Yar Nih A Chim - Khuaruah Har News
Tulio kawlram thawngpang ahalar ngai mi pakhat cu, Min Zar yar leainnchung nu nih an sinumnu te acid nih an tawih, nanmte nih an sawh, sobul nih an tuk ruang ah Min Zar Yar telh in minung4hna cu May7tuah khan North Okala biacaih zung nihavawikhatnak bik bia an caih hna.
Tuni zungching ah tazuksawng Min Zar Yar iapu palik penson U Maung Maung Aye cu biacaih zung nih kyat ting 10 in minung pahnih nih aamahkhan nak an pek piak hnuahavawi hnihnak zungching cu May 21 ah khan an ching than hna tiah theihasi. Tazuksawng Min Zar Yar cu kum tling rihlo mi an sinum nuteatlaihhrem ruangah Tamwe palik nihcun ahmuh an phunh piak.
Biacaih zung an chuah le cangka in mipi nih Min Zar Yar cu bia an hal i achimmi bia cu, mipi nih nan kan hmuh ning bangasi lo. Dawtnak ngeih ahcun kan vanttha ko tiah achim. Tuni Min Zar Yar biachim ning zoh ah athil tuahmi cu aning zawng pakhat te hmanhazak rua lo. Ning nghal ngai in mipi hmai ah bia achim huar ko.
Shwe Poke Kaan palik nih Tamwe myone zuksin tazuksawng Min Zar Yar nupi Ma Pho Ngung Pwint anu pi pa Maung Maung Aye hna cu pohmah 505,324,325,114 hmang inahmuh an phunh hna. Min Zar Yar le anu pi hna cu Karen ram leiaMin Zar Yar manager pa he April9ah khan an zam i Karen raalkap (DKBA) phu hna nih an rak tlaih hna Mawaddy palik sakhan ah anrak pek hna.
သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာအမှု ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်၊ ယောက္ခမဖြစ်သူ အာမခံရ…
ဒီနေ့ ရုံးချိန်းမှာ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာရဲ့ ယောက္ခမဖြစ်သူ အငြိမ်းစား ရဲဝန်ထမ်း ဦးမောင်မောင်အေးကို တရားရုံးက ကျပ် ၁၀ သိန်းတန် အာမခံ လျှောက်ထားသူ ၂ ဦး နဲ့အာမခံပေးခဲ့ပြီး ဒုတိယမြောက် ရုံးချိန်းကို မေလ ၂၁ ရက်နေ့ကို ပြန်လည် ချိန်းဆိုထားကြောင်း တာဝန်ရှိသူတွေက တဆင့် သိရပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာဟာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ အဲဒီ အိမ်အကူကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှု လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး မိန်းကလေး ဘက်က တာမွေ ရဲစခန်းမှာလည်း အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။
တရားရုံးထုတ်တွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာက “အားလုံးထင်သလိုမဟုတ်ပါဘူး။ စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းတယ်။ ဖားကိုက်တာကနေ ကျားကိုက်တာ ကျားကိုက်တာကနေ ဂေါ်ဇီလာဖြစ်သွားတယ်ဗျာ” ဟူသော စကားများကို အော်ဟစ်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
ရွှေပေါက်ကံ ရဲစခန်းမှာတော့ တာမွေမြို့နယ်နေ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ၊ ဇနီး ဖြစ်သူ မဖူးငုံပွင့် နဲ့ ဦးမောင်မောင်အေးတို့ကို (ပ) အမှတ် ၅၀၅၊ ပုဒ်မ ၃၂၄၊ ၃၂၅၊၃၅၄၊ ၁၁၄ တို့နဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။
စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ မင်းရာဇာ နဲ့ ဇနီး ဖြစ်သူဟာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ဖို့ လည်း ကြိုး စားခဲ့ပြီး သူတို့ ၂ ဦးကို မင်းရာဇာရဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်သူနဲ့ အတူ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် (DKBA) တပ်ဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၉ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မြဝတီမြို့မရဲစခန်းကို ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။
← Apam Khawh Ning Cu: Hnathial Nunhak Muidawh Tuicang Tiva Ah A Tla I A Nunnak A Liam
Ting 25 man Ram an ngeihmi an zuar i misifak hna sin ah bomhnak apetu Pasha te unau →
Coronavirus cu SARS nak hmanhin alet 20 tiang bakinathawn deuhnak kongcu hmuh than asi